Amasayithi afana ne-Craigslist (2020) - Izindlela ezi-10 ezihamba phambili ezihamba phambili - Uhlu
Amasayithi aphezulu ayi-10 afana ne-Craigslist (2020)
I-Craigslist yindawo yabantu abaningi lapho befuna ukuthengisa noma ukuthenga izinto ezisetshenzisiwe endaweni ngenxa yezici ezinhle ezihlinzekwayo. Leli sayithi linikela kakhulu kubathengisi nakubathengi ngokufanayo. Futhi okugqame kakhulu kubo ukuthi iCraigslist imahhala ngokuphelele, ilandelwa esinye isici esimangazayo sokuthi okwenziwayo kungokwasendaweni, futhi imikhiqizo yakho oyisebenzisile kungenzeka isuswe ngokushesha kunalokho okulindele futhi uthole imali yakho ngokushesha.
Kodwa-ke, uma ngasizathu simbe ungafisi ukusebenzisa i-Craigslist futhi ubheke enye indlela evumelana nethuba lakho, lapha siqoqe uhlu lwezinye izindlela eziyi-10 ze-Craigslist. Dlula kuzo ngokuphelele futhi sibheja ukuthi uzothola eyodwa oyifunayo. Lezi ezinye izindlela, cishe noma ngaphansi, zenza umsebenzi ofanayo nowenziwa yiCraigslist.
Ezinye izindlela zePutlocker
Uhlu Lamasayithi Aphezulu ayi-10 afana ne-Craigslist:
U-Oodle unendlela ehluke kancane enkonzweni abakunikeza yona yokuthenga nokuthengisa imikhiqizo, endaweni. Iningi lamasayithi lizoklelisa imikhiqizo abathengisi abayithumela ngokomzimba emakethe. U-Oodle ubala eminye imikhiqizo ngqo.
Isici esisodwa se-standout i-Oodle esihlinzeka abasebenzisi bayo ukuthi babala imikhiqizo evela ku-eBay yeveni yangakini. Esinye isici abathengisi abaningi abathanda ukusisebenzisela i-Oodle ukuthi bavumela abathengisi ukuthi bakhangise ngemikhiqizo yabo kuFacebook.
Uma uzibuza ngezigaba zemikhiqizo ye-Oodle, uzothola ngenkathi udlula kusayithi ukuthi banezigaba ezahlukahlukene njengezilwane ezifuywayo, ubuntu, izinsizakalo, njll.
IBookoo iyinsizakalo elungele umndeni evumela ukuthi udale uhlu lwakho lwezinto noma okungcono kakhulu, ake sikhangise ukuthengiswa kwegceke. Izindawo zeBookoo ziyatholakala kulo lonke izwe, iningi lazo likhona emadolobheni anezisekelo zamasosha. Futhi kungani kungenjalo? Ngempela kuyisiza esiwusizo kakhulu kumalungu ezempi ukuthengisa noma ukuthenga imikhiqizo njengoba ukuhamba kuyingxenye yempilo yabo yobungcweti. Isayithi lincane ngokuqhathaniswa kunezinye kepha liyipulatifomu esebenziseka kalula futhi enamakhasimende alula, enengxoxo ebukhoma.
UBookoo uphinde azame ukuba nobuntu ngokwengeziwe, enekhono lokwenza iphrofayli elinobuciko nesithombe sephrofayela. Le phrofayili ibuye igcine izinto ozibhale esikhathini esedlule uma zikhona.
IGumtree ayisona isiza samahhala, kepha kungaba ngokuya ngesigaba somkhiqizo. IGumtree iyindlela enhle kunoma ngubani ohlala ngaphandle kwase-US. Isayithi labo lase-US alinalo uhlu oluningi.
ILocanto inikeza ngezinsizakalo zayo emazweni angaphezu kwama-60, namadolobha amakhulu e-US anamabhodi we-Locanto. Konke ukufakwa kuhlu kungenzeka kungabi okwasendaweni njengoba bemukela izikhangiso ezikhokhelwe ezivela kubathengisi bakazwelonke nabo. Uma uvela eLos Angeles, eMiami, noma eNew York, iLocanto iyindlela enhle njengoba sekushiwo, ukuthi amadolobha amakhulu afana nalawa anamabhodi e-Locanto.
Ngenkathi ukuthumela isikhangiso ebhodini ledolobha kumahhala, kungadingeka ukuthi ukhokhe okunye uma ufuna ukuthi isikhangiso sifinyelele kwinani elikhulu labathengi noma amanye amadolobha angeziwe. Ukususa izikhangiso ezivela eceleni ohlwini lwakho kuzokubiza nemali.
5. UPenny Saver
Ikhangiswe “njengamanani endawo ahamba phambili”, uPenny Saver udinga i-akhawunti, okusho ukuthi kuzodingeka ukuthi ubhalise njengomsebenzisi kuqala. Lokhu akufanele kube yinkinga njengoba lo msebenzi ulula kakhulu futhi awudli isikhathi sonke. Ungaqala ngokuchofoza kubhena enkulu 'Thumela isikhangiso'.
I-AdLandPro ibikhona kusukela ngo-1998, futhi idinga ukuthi wakhe i-akhawunti futhi ube ngumsebenzisi obhalisiwe. Lokhu kungezwe ekuphepheni kobudlelwano phakathi komthengi nomthengisi. Uma kwenzeka ubhekene nanoma yiziphi izinkinga ngabakhwabanisi esizeni, isici sokubika imisebenzi enjalo siyatholakala futhi.
IGeeboo ingesinye isiza esiphephile noma ake sithi enye indlela ephephile ye-Craiglist esetshenziswa yimiphakathi yendawo. Kuphephile ngoba banikela ngezinyathelo eziningi zokuphepha namathiphu kubo bobabili abathengi nabathengisi, kufaka phakathi isici sokubika ugaxekile noma ukuhlukunyezwa.
8. USA Namuhla
I-USA Today ingxenye ehlukanisiwe yephephandaba, i-USA Today, lelo iphephandaba elidumile e-US. Ngosizo lwalesi sigaba, ukukhangisa kwakho kuqinisekisiwe ukufinyelela kubantu abahlukahlukene.
9. Izikhangiso Globe
I-Ads Globe, njengoba igama layo liphakamisa, isebenza emhlabeni wonke. Leli sayithi lenzelwe ukulandelela ngokuzenzakalela noma ukuthola indawo okuyo. Uma kwenzeka, lena akuyona indlela ofuna ukuhlinzeka ngayo, vele ukhethe inketho ethi 'Shintsha Indawo'.
10. Izindaba Zomuzi
ICity News ifaka izindawo ezinjenge-US, Canada, Great Britain, Europe, Asia, Australasia, futhi ngokuyisisekelo, umhlaba. Lapha, ukuthumela akukho mahhala, kepha kukhona futhi inketho yokuguqula isikhangiso sakho esijwayelekile sibe ngesifakiwe, esizokubiza amadola ambalwa. Kukhona nezinye izici ongafuna ukuzama ngemali encane kakhulu.
Nawa amathiphu ambalwa Wokuthumela Izikhangiso:
Sikuhlanganisele amathiphu ambalwa ukuze ukwazi ukuthenga noma ukuthengisa kuleli sayithi ngokuphepha nangempumelelo.
Bhala isihloko esicacile nesikhangayo, usenze sibe sifushane futhi sinembe. Ngale ndlela kulula ukuqashelwa abathengi. Qiniseka ukuthi ulayisha izithombe noma amavidiyo acacile.
Qiniseka ukuthi awabelani ngemininingwane yomuntu siqu, njengekheli lakho lasekhaya, imininingwane yezokuphepha, futhi kunconywa ukuthi uhlangane nabathengisi bakho noma abathengi phakathi nesikhathi sasemini.
Ungabanaki abakhohlisi noma abahlukumezi, uma uhlangabezana nanoma ikuphi. Noma kungabonakali ukuthi bakulimaza. Siza ukwenza umuzwa ophephe kwabanye ngomusa wakho omncane.
Uma izinto zakho zinamaphutha, kunconywa ukuthi usho lokho. Ukuthembeka ngeke kukusize kuphela kepha nabathengi.
Siyethemba lolu hlu lusizile ukuthola isiza esivumelana nezidingo zakho, futhi siqinisekile ukuthi ngazo zonke izeluleko zokuphepha neziphakamiso zethu eziyi-10, uzoba nokuhlangenwe nakho okuphumelelayo.
Ezinye izindlela zeRabbit - Top 6
Izindlela ezihamba phambili ze-Cable TV
'I-Slut Whisperer' Ka-Kirill Bichutsky Kawonke Wonke Ka-2022 - Yazi Ngeminyaka Yakhe, Impilo Yasencane, Nomsebenzi Wakhe!
Inselelo Isizini 38: Usuku Lokukhishwa: Konke Odinga Ukukwazi!